Uhlobo lokuqala lweMicrosoft Edge yeLinux luzofika ngo-Okthoba | Kusuka kuLinux
Uhlobo lokuqala lweMicrosoft Edge yeLinux luzofika ngo-Okthoba
IMicrosoft isimemezele okokuqala kwayo ukuhlanganiswa de IMicrosoft Edge yeLinux izofika ngenyanga ezayo njengokubuka kuqala.
Ukuthuthela ku- Chromium ivumele iMicrosoft ukuthi yenze i-Edge isiphequluli esinepulatifomu, ngakho Aplicación kuyinto itholakala ku-Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 naku-MacOS.
IMicrosoft ikuqinisekisile ngokusemthethweni lokho inguqulo ye-Edge yeLinux kuyinto kuthuthukiswa, kodwa Compania akafuni ukukhuluma ngosuku lokukhishwa olungaba khona.
Ukuhlanganiswa okuzokhishwa Olandelayo isonto lizofika libe linye version ukuhlolwa kwangaphambi kwesikhathi, ngenkathi iMicrosoft isazoqhubeka nokusebenzela ukuthuthukela izinhlobo ezilandelayo. I-Edge yeLinux cishe izolandwa ezindaweni ezifanayo nezinguqulo zeWindows ne-MacOS.
IMicrosoft ayikhulumanga okuningi ngeMicrosoft Edge yeLinux, kepha kulula ukukuqagela lokho inkampani izozama ukwengeza izici ezifanayo nezinguqulo yeWindows.
IMicrosoft Edge yeLinux enguqulweni yayo yangaphambilini izoshicilelwa kusayithi leMicrosoft Edge Insider futhi ingafakwa nabaphathi bephakeji ukwenza ifayela le- ukufakwa kugcine kulula.
Inhloso yeMicrosoft ukuthola impendulo eningi ngangokunokwenzeka kubathandi nakubasebenzisi abaphambili abahlola uhlelo ngaphambi kokukhishwa. lance la version end, mhlawumbe ekuqaleni kuka-2021.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Uhlobo lokuqala lweMicrosoft Edge yeLinux luzofika ngo-Okthoba
U-Arturo Javier Ducoing Ortiz kusho
Uma ngicabanga ukuthi ngishiye iWindows ngoba ukuphequlula i-Intanethi bekukubi, angazi ukuthi ngizozizwa kanjani uma ngizama isiphequluli seMicrosoft endaweni yeLinux ngemuva kweminyaka eminingi kangaka.
Phendula u-Arturo Javier Ducoing Ortiz
Ku-Linux kunezinqwaba zeziphequluli ezihlangana ngokuphelele ohlelweni ngaphandle kwesidingo sokufaka noma yini evela ku-Microsoft. Asikho isidingo futhi umphakathi awuzange usicele. Ngeke inikele nganoma yini esekhona engasasebenzi. Peroooo ... kulo mhlaba kunabantu bayo yonke into abanye bazoshaya izindlebe.
Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, i-CR ye-Snort 3 ekugcineni yakhishwa.